Madaxweyne Farmaajo oo caqabad hor leh soo wajahday & Wasiir Hargeysa ku sugan oo…… – Puntlandtimes
Madaxweyne Farmaajo oo caqabad hor leh soo wajahday & Wasiir Hargeysa ku sugan oo……
HARGEYSA(P-TIMES)- Wasiirkii hore ee Wasaarada Maaliyada Somaliland Eng Maxamed Xaashi Cilmi ayaa ka hadlay Wada-hadalada Soomaaliya iyo Somaliland, isagoo baaqna usoo jeediyey Xukuumada Muuse Biixi.
Ex Wasiir Maxamed Xaashi ayaa Xukuumada Madaxweyne Biixi ugu baaqay inay dib uga laabato Wada-hadalada ay la galayso Dowladda Federaalka Soomaaliya.Maxamed Xaashi ayaa baaqiisa sabab uga dhigay Amni-darada ka jirta Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, isaga oo ka dhawaajiyey inay hadda mareyso meeshi ugu xumeyd.
“Nimankan na-leh Wada-hadla, halkee laga bilaabi, ma Dowlad baa hadda jirta waatan maalin walba diyaaradu garaaceyso, waxay xukumaan majirto Muqdisho ma xukumaan iska daa meel kale markaa yeynu la xaajoona maxay hayaan oo aan kula xaajona. Soddon kun oo ciidan ajnabi ah ayaa ilaaliya oo hor fadhiisigooda ayaa xaaran ah”.
Waxa uu ku sii daray “Kolkaa wax aanu isku wareerino oo laga wada hadlaa majiro, Dowladeenuna wakhti waxba-yey iskaga lumin waxan waxba inogu filneyn”.
Dhinaca kale Maxamed Xaashi ayaa shuruud ku xidhay Dowladda Federaalka si ay u furmaan Wada-hadalada Soomaaliya iyo Somaliland “Kuwii na-laayey ee magaalo walba xasuuqeeda gaystay wey wada joogaan markaa waxaanu leenahay qiimihii nagala laayey magtoodi ha bixiyeen kolkey bixiyaan halaga wado hadlo”.
Arintani ayaa u muuqata fariin ku wajahan madaxweyne Farmaajo oo ka wal walsan xal u helida xaalada dalka Soomaaliya oo haatan jaah wareer cusub uu haysto.
Isaaq isma dhaamo, waa wada Somali diid, ninkaa hadley waa danbiilayaashii SNM ta markii ay soo galeen, dad badan oo shacab ah ayuu ku laayey Borama Hargeysa iyo burca. waa 80 jir munaafaqa, tala la weydiin karaana ma jirto, hadey wada hadal diidaan kuwa Barlamaanka ku jirana hala eryo. sidaasey ku fiican tahay.
somaali buu diidan yahay baad leedahay,soomaalidu xaggay joogtaa, ma waxaad leedahay dabka gurigaaga haysta kaagana aan ku qabto, aan isla ololee, caqli daanyeer.
Doqon ka Talaabsade says:
Inaad goroftahay ayaan kuu sheegin waayo ma guri baad leedahay. Soo ma ogid in Hargaysa, Burco iyo Berbera oo gaajo iyo shaqo la’aan ka taagantahy inuu dal kuu yahay. Adiga ku khasban inaad la hadashid Soomali wayn waayo miskiin cuqdadaysan ayaad tahay marna ku haya waa la i xaquusay marna ku haya Ingriis ayaa na gumaystay. Waxaan filayaa inay soo dhamaatay khiyaaligii oo runta la isugu yimid. Dhul iyo dad midna ma haysid waxaana meel walba daadsan qaxooti cusub oo barna ku dhinteen badaha. Labo bil ka hor ayaan tegay Hargeysa waana dareemaysaa Fakhriga iyo gaajada iyo shaqo la’aanta taal. Cidna ha u samaynina Ixsaan ee badbaadiya qoyska Isaaq si aan u dabar go’in.